Inqaku. I-Emidlalo kuba Acquisition ka-Ilungelo Ubunini
Ilungelo ubunini entsha nto, manufactured okanye yenziwe ngumntu ngokwakhe, ngexesha abiding ngumthetho kwaye yi-ezinye isemthethweni izenzo, uya kuba acquired ngalo mntu. Ilungelo ubunini ukuba iziqhamo, iimveliso kwaye imivuzo, derived nge-sebenzisa i propati, uya kuba acquired kwi emidlalo, stipulated nge Inqaku somgaqo-langoku Ikhowudi.
Ilungelo ubunini ukuba ipropati, apho sele yayo umnini, zibe acquired ngomoya omnye umntu kwi-emidlalo ye-isivumelwano ka-ukuthenga kwaye ziyathengiswa, exchange kwaye eyenza isipho, okanye emhlabeni ka olunye uhlobo le yaba kwi alienation le propati. Kwimeko — ummi ke ukufa, ilungelo ubunini ukuba ipropati unabo owned uya kudlula nge ilungelo succession ukuba abanye abantu luthobela intando okanye kunye nomthetho.
Kwi-iimeko kwaye umyalelo, stipulated yi-langoku Ikhowudi, umntu unakho kufumana ilungelo ubunini ukuba ownerless ipropati, ipropati, egama umnini awaziwa, ipropati, apho umnini sele renounced okanye apho yena sele ezilahlekileyo ilungelo ubunini kwelinye umthetho-stipulated emidlalo.
Ilungu le-izindlu, izindlu-ukwakhiwa, ilizwe cottage, garage okanye olunye uhlobo umthengi cooperative, kananjalo abanye abantu, enjoying ilungelo ukwenza share accumulations, abo behlawule phezulu epheleleyo yabo share igalelo kuba cambalala, eli lizwe cottage, garage okanye ezinye iikota, esinikwe ezi abantu yi-cooperative, uya kufumana ilungelo ubunini ukuya wathi ipropati.
Amalungelo Ilifa Abantu, Abo Asingabo abanini-Mhlaba. Amalungelo ilifa uya kuba, ecaleni ilungelo ubunini: — ilungelo njengelifa ubomi ulawulo elizweni uzibeke (Inqaku)
ilungelo osisigxina (perpetual) ukusetyenziswa komhlaba uzibeke (Inqaku)
servitudes (Amanqaku kwaye)
ilungelo yezoqoqosho nolawulo propati (Inqaku) ilungelo lokusebenza nolawulo propati (Inqaku).
Amalungelo ilifa ukuba ipropati zibe possessed yi-abantu, abo asingawo abanini bezinto olu phawu.
Unikezelo ka-ilungelo ubumnini ukuba ipropati komnye umntu akayi kuba emhlabeni kuba cessation lomnye amalungelo ilifa ukuba olu phawu.
Amalungelo ilifa umntu, ngubani na umnini-propati, uya ikhuselwe ukusuka zabo utyeshelo lomgaqo-nanguye nawuphi na umntu kwi-oda, stipulated nge Inqaku ka-langoku Ikhowudi.
Ingcamango kwaye Emidlalo kuba Ngokufanayo Ipropati ukuba Baphakame. Propati, olukuye umnini ezimbini okanye eziliqela abantu, baya belong kubo ngo ilungelo ngokufanayo mashishini.
Uphawu zibe kwi-ngokufanayo ubunini, kunye isabelo nganye abanini-mhlaba kwi ilungelo ubunini elichaziweyo (isabelo ubunini), okanye ayichazwanga (edibeneyo ubunini).
Aphinda umnini-propati iya kuba share ubunini, ngaphandle i iimeko, xa umthetho uchaza ukumiselwa kwebandla inkqubo edibeneyo ubunini ukuba olu phawu.
Aphinda ubunini baya kunyuka xa kwi ubunini ezimbini okanye eziliqela abantu ziphantsi propati, ezingenako umahlule ngaphandle ukutshintsha yayo intended injongo (indivisible zinto) okanye apho akayi kuba phantsi sisahlula ngesinyanzelo umthetho. Aphinda umnini — hluleka ipropati baya kunyuka kwi iimeko, stipulated ngumthetho okanye nge-i-sivumelwano.
Ngo isivumelwano phakathi abathatha inxaxheba kwi-edibeneyo ubunini, kwaye ukuba akukho sivumelwano kusenokuba ufikelele — yi-inkundla isigqibo, share ubunini ukuba ngokufanayo ipropati babe kumiselwa